रेशम चौधरी रिहा, यो मन्त्रालय दिने ओलीको घोषणा ! – News543Online
March 27, 2021 adminLeaveaComment on रेशम चौधरी रिहा, यो मन्त्रालय दिने ओलीको घोषणा !
पाँच वर्षअघि टीकापुरमा दूधे बालकसहित सातजना प्रहरीहरुको ज्यान गएको घटनामा अदालतले दोषी ठहर्याएका जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आज माइतीघर मण्डलामा रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै जारी धर्नामा पुगेर त्यस्तो संकेत गरिसकेका छन् । बादलले मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको र तत्काल वार्ता कमिटी बनाउन भनेका छन् । सरकारले पनि वार्ता कमिटी बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ ।
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाई गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक भएका छन् । उनले जसपा नेतृत्वसँग पटक पटक यस विषयमा संवाद गरी प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।
रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गरेर रिहाई गरी मन्त्री बनाउनेसम्मको तयारी भएको बुझिएको छ । जसपाबाट सरकारलाई समर्थन प्राप्त भएमा १० भन्दा बढी मन्त्री बनाउन ओली तयार भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
त्यसका लागि पनि रेशम चौधरीको रिहाईबारे सरकारका सकारात्मक भएको छ । रिहाई मात्र नभई उनलाई नै मन्त्री बनाउनेमा समेत तयारी भइसकेको बुझिएको छ ।
७ भाद्र २०७२ मा टीकापुरमा थारुवान प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले ७ जना सुरक्षाकर्मीको वि”भ”त्स ह”त्या गरेका थिए । एकजना दु’धे बालक समेत मा”’रि”’एका थिए ।
घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको टोलीले आन्दोलनकारीलाई टीकापुरस्थित सरकारी कार्यालयमा थारुवान प्रदेशको बोर्ड टाँस्न खोज्दा रोकेको थियो । सोही क्रममा झ””ड”’प हुँदा प्रहरीमाथि आ””क्र”””मण भएको थियो ।
घटनापछि रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायतमाथि ‘ह”त्या”को अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । रेशम चौधरी भारतमा लुकेर चुनाव ल”””’डेका थिए । उनले गएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा भारी मतले विजय हासिल गरेका थिए । तर, ह”””त्या अभियोग लागेकाले उनी निलम्बित भएका थिए ।
जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुनमा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
देशैभरको नगरपालिका मध्य पहिलो बन्यो भरतपुर महानगरपालिका, ओलीको केहि चलेन
सम्पुर्ण नेपालीहरुले NO MCC भन्दै सक्दो सेयर गरेर बिरोध गरौ ।